‘म कोटा प्रणालीको विरोधी हुँ, प्रतिस्पर्धाबाटै इपानमा आउन चाहन्छु’ - UrjaKhabar ‘म कोटा प्रणालीको विरोधी हुँ, प्रतिस्पर्धाबाटै इपानमा आउन चाहन्छु’ - UrjaKhabar
काठमाडाैं । सात वर्षदेखि जलविद्युत् व्यवसायमा सक्रिय हुँदै आइएकी छन्, इशा श्रेष्ठ । विभिन्न क्षेत्रको अनुभव संगालेर जलविद्युत्मा होमिएकी उनी निलगिरि खोला जलविद्युत् कम्पनीकी सञ्चालक हुन् । उनको कम्पनीले म्याग्दीमा सय मेगावाटका २ आयोजना अघि बढाएको छ । उनी अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को नयाँ कार्यसमिति सदस्यका लागि उमेद्वारी दिएकी छन् । श्रेष्ठले सूर्यप्रसाद अधिकारी समूहबाट उमेद्वारी घोषणा गरेकी छन् । ऊर्जा खबरले यिनै विषयमा उनीसँग गरेको छोटो कुराकानी :
जलविद्युत्मा कहिलेदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ ?
मैले छोटो समयमा धेरै क्षेत्रको अनुभव बटुल्ने अवसर पाएँ । निलगिरिमा आउनुअघि म हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्डमा कार्यरत थिएँ । त्यो कम्पनीले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने हुँदा जलविद्युत् पनि प्राथमिकतामा थियो । त्यहाँ काम गर्दा धेरै जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएर काम गर्ने अवसर जुर्यो । त्यहीँबाट निलगिरि अर्थात् जलविद्युत्मा आउन सजिलो भयो ।
इपान सदस्यका लागि मत माग्ने यहाँको रणनीति के हो ?
इपानको भूमिका यो क्षेत्रका साना–ठूला समस्या उठाउन अति महत्त्वपूर्ण छ । म पनि यो क्षेत्रमा लागेको ७ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । मसँग एउटा आयोजना निर्माण चरणसम्म पुर्याउन के–के प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्नेबारे आधारभूत कुरादेखि काम गरेको अनुभव छ । अनुमतिपत्र लिँदादेखि प्रसारण लाइन नबनेर विद्युत खेर गएको अवस्थासम्मका समस्याबारे म जानकार छु ।
इपान जलविद्युत्का समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष लबिङ गर्ने संस्था हो । यसो हुँदा ममा इपान कार्यसमितिमा बसेर काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । भोलिको दिनमा कार्यसमितिमा बसेर यो क्षेत्रमा देखिएका साझा समस्या समाधानको पहल गर्न सक्छु भन्ने लागेर नै मैले सदस्यमा उमेद्वारी दिएकी हुँ । इपान निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तहबाट निर्णय गराउन भूमिका खेल्नकै लागि हो । यो कामका लागि म आफूलाई सक्षम र योग्य ठान्छु । मेरो कामलाई देखाएर नै मत दिन आग्रह गरिरहेको छु ।
कुन आधारमा आफू इपान कार्यसमितिका लागि लायक ठान्नुहुन्छ ?
म ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लामो समयदेखि क्रियाशील छु । यो क्षेत्रका सबैखाले अनुभव छ । म महिला पनि हुँ । त्यसमाथि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा आएकी छु । भोलि कार्यसमितिमा रहेर धेरै काम गर्न सक्छु । ममा नीतिगत समस्या समाधानमा पहल गर्न सक्ने क्षमता छ । इपानका सदस्य कम्पनीका साथीहरूले मेरो क्षमता पहिचान गर्नुभएको छ भनेदेखि मलाई मत दिएर अवश्य जिताउनुहुनेछ ।
चुनावी माहोल कस्तो बनिरहेको छ ?
इपान ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन हो । सामान्य तरिकाबाट पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने थियो । तर, पछिल्लो माहोल हेर्दा इपान निर्वाचन कुनै राजनीतिक दलको भन्दा कम देखिएको छैन । म राजनीतिमा धेरै चासो दिने व्यक्ति होइन । तैपनि, अहिले जे भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक चुनावसँग मिल्दोजुल्दो छ । इपानमा धेरै राजनीति देखियो । यो पटक मैले पनि उमेद्वारी दिएको हुँदा यी कुरा प्रत्यक्ष अनुभुत गर्न पाएँ । सहमति गर्न पटक–पटक वार्ता हुनेदेखि प्रचारप्रसारमा हिड्ने सबै राजनीतिक दलको निर्वाचन जस्तो । दौडधुप धेरै छ ।
अब निर्वाचनबाटै निकास निस्केला त ?
सुरुका दिनमा सहमतिबाटै कार्यसमिति बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मैले बुझेको आधारमा भन्नुपर्दा निर्वाचन नै एकमात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचन हुँदा योग्य, सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिहरू आउने हुँदा यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ । सहमतिका लागि प्रयास भयो । तर, अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेकाले अब निर्वाचनमै जानुपर्छ । र, विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियाबाट जाँदा इपानले धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
महिलाहरू आरक्षण कोटा लिएर बस्ने तर ठूलो पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने देखिन्छ । तपाईंले पनि सदस्यमा उमेद्वारी दिनुभयो ?
महिलाहरूले काम गर्न नसकेर सानो पद लिन्छन् भन्ने कुरा मनमा चसक्क बिझ्छ । महिला कोटा भन्ने शब्द सुन्दा नै कसैले बाध्यताले दिएको जस्तो लाग्छ । म अहिले सदस्यमा उठेको छु तर प्रतिस्पर्धामा मैदानमा उत्रिएर । इपानमा बसेर काम गरेको मसँग विगतको अनुभव छैन । यही कारणले मैले यो पटकलाई सदस्यमै उमेद्वारी दिएकी हुँ । यो पटक जितेँ र कार्यसमितिमा काम गर्ने अवसर मिल्यो भने ३ वर्षमा प्राप्त हुने अनुभवले अर्को पटक माथिल्लो पदमा जानेछु । एकै पटक ठूलो पद हेर्नुभन्दा काम गर्न सक्ने क्षमताको आँकलन पनि गर्नुपर्छ । यो पटक म सदस्यमा उठेकी हुँ । माथि पुग्न पहिलो खुड्किलोबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।
यहाँको बिचारमा अबको इपान कस्तो हुनुपर्छ ?
अब काम गर्ने कार्यसमिति आउनुपर्यो । कार्यसमितिमा आएँ भनेर चुप लागेर बस्न हुँदैन । काम गर्ने टिम आउनुपर्छ । यो क्षेत्रका मुद्दा जोडदाररूपमा सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन सक्ने क्षमता अबको टिमले राख्नुपर्छ । व्यक्तिगतभन्दा साझा मुद्दा उठाउने नेतृत्व इपानलाई चाहिन्छ । अहिलेको इपान धेरै सुस्त छ । वर्षमा १-२ कार्यक्रम गर्नुबाहेक केही काम गरेको देखिँदैन । यस्तो टिम फेरि आयो भने हाम्रा साझा मुद्दा भोलिको दिनमा पनि ओझेलमा पर्नेछन् । यसकारण, अबको इपान सशक्त र जोडदाररूपमा आफ्ना माग सबै तहमा राख्नसक्ने हुनुपर्छ ।